“လမ်းနံဘေးနားကပန်းနဲ့တူသောထမင်းဆိုင်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “လမ်းနံဘေးနားကပန်းနဲ့တူသောထမင်းဆိုင်”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 23, 2011 in Local Guides, My Dear Diary | 24 comments
ဒီနေ့ ညနေစောင်းမှာ အိမ်ရှေ့ဖြတ်သွားတဲ့အချဉ်ပေါင်းသည်လေးဆီက သီချင်းလေးကို နားစွင့်လိုက်တော့”လမ်းနံဘေးနားကပန်းကို မပန်ကြပြီ”ဆိုတဲ့ စာသားလေးပါတဲ့ သီချင်းလေးကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
လမ်းနံဘေးမှာအလေ့ကျပေါက်တဲ့ပန်းများဟာအလွယ်တကူဆွတ်ချုလို့ရနိုင်တော့ လူတွေကတန်ဘိုးမထားတတ်ကြတာလေးကို သီချင်းလုပ်ဆိုထားတာပါ။
လောကမှာ ကောင်းမွန်ပေမယ့်လဲ အလွယ်တကူရတော့ တန်ဘိုးမရှိဘူးထင်ပြီး ဖယ်ထားကြတာတဲ့ ကိစ္စတွေက အများကြီးပါ.။
ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီး တွေးမိပြန်တာက နေ့လည်က မိတ်ဆွေတွေနဲ့အမှတ်မထင်ရောက်သွားတဲ့ထမင်းဆို်င်လေးကိုပါ။
(ကျနော့်မိတ်ဆွေက မန်းလေးမြို့နှံ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိုပေါက် မရောက်ဘူးတဲ့ဆိုင်ခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးခေါ်လို့ရောက်၊
အဲဒီဆိုင်လေးက မန်းလေးမြို့ရဲ့ အထင်ကရထဲမှာလည်းမပါဘူး၊
မြို့လယ်လို့ပြောရတာက 83-84ကြားနဲ့23-24ကြားမှာ ဒီဆိုင်လေးက ရှိနေလို့ပါဘဲ။
84လမ်းအတိုင်းလာ တောင်ဘက်ကလာမယ်ဆိုရင် 23လမ်းဒေါင့်မရောက်ခင်မှာ
သုံးအိမ်မြောက်လောက်မှာ နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်လေး တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(ထုံးစံအတိုင်း ၀င်းကြားထဲက သွားရမယ်ဆိုရင် တော့ 84လမ်းပေါ်မှာကားထားခဲ့။
စက်ဘီးတို့ဆိုင်ကယ်တို့လာမယ်ဆိုရင် တော့ ၀င်းကြားထဲစီးဝင်လာခဲ့လို့ဖြစ်။
ဆိုင်ကယ်စီးဝင်မယ်ဆိုရင် နည်းနည်းလေးတော့ သတိထားစီးမှရပါမယ်)
အ၀င်ဝမှာ ညောင်ရွက်စိမ်းစိမ်းလေးတွေ တန်းစီလို့ချိတ်ထားပါတယ်။
ဆိုင်လေးကအိမ်အောက်ထပ်မှာဖွင့်ထားပြီး အရှေ့ဘက်ခြမ်းက ဖယောင်းပုဆိုးခင်းထားတဲ့ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာ စားပွဲအကူ လေးလုံးအိမ်အလည်ခေါင်မှာတော့ ဟင်းတွေတင်ထားတဲ့ မတ်တပ်ရပ်စားပွဲခုံတစ်လုံးနဲ့
ထူးခြားတာကတော့ အလှူမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အိမ်ဆွမ်းကျွေးတွေမှာစားရတာနဲ့တူလို့ပါ။
ကြမ်းပြင်အထက်မှာ ခင်းထားတဲ့ဖယောင်းပုဆိုးပေါ်မှာဖင်ချထိုင် ဗမာပီပီအားရပါးရလွေးရုံပါဘဲ။
ဒါကတော့ ဆိုင်အခင်းအကျင်း အရှေ့ဖက်ခြမ်း
အနောက်ဘက်ခြမ်းက အခင်းအကျင်း
ဘေးနားမှာတော့ ယင်ကောင်မလာအောင် ဖယောင်းတိုင်မီးလေးထွန်းထားပါတယ်။
ဟင်းခွက်ကလေးတစ်ခုစီလိုက်ကြည့်တော့ ဆိတ်သားနှပ် ဆိတ်သားလုံး ဆိတ်သားထောင်းကြော်
ငါးဆုပ်ဟင်း ငါးဟင်း ပုစွန်အကောင်လတ်လတ်ကလေးတွေကို ဆီပြန်ချက်ထားတာ။
ကြက်သားဆီပြန် ကြက်သားကြော် ငါးကြော် ဟင်းအမယ်တော်တော်လေးစုံပါတယ်။
ရာသီစာ ဒိန်ညင်းသီးပြုတ်လဲရှိ ဒိန်ညင်းသီးကို အပြားလိုက်ထောင်းပြီးချက်ထားတာလဲပါ
ကဲ စားချင်တာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရွေးပေတော့ ဇလုံလေးတွေတန်းစီထားတယ်
အဲတာနဲ့ တစ်ယောက်က ပုစွန်နဲ့ နောက်တစ်ယောက်က ငါးဆုပ်ဟင်း
ဟင်းလိုက်ပွဲကတော့ ဒိန်ညင်းသီးချက်နဲ့ ဆိတ်သားထောင်းကြော်။
(တို့စရာကလဲ အစုံ ရှောက်ရွက်အစီးလိုက်၊ပဲစောင်းလျားသီးပြုတ်၊သခွားသီး ပလပ်စတစ်စကာခုံးလေးနဲ့အပြည့်
ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်တို့ ထမင်းစားကြတဲ့အခါ သုံးယောက်ဆို ဟင်းသုံးမျိုးမှာ
စားကြည့်မိလို့ သိလာတာကတော့ ဟင်းတစ်ခွက်စီက သီးသန့်ချက်ထားတာပါဘဲ။
ဟင်း အားလုံးအတွက် ဟင်းအနှစ်ကို ရောလို့ချက် ပြီးမှပြန်ခွဲပြီး အသားတစ်မျိုးစီနဲ့ရောထည့်တာပါ။
အတို့အမြုပ်လေးနဲ့စားတာကို တစ်ပန်းကန်ကျော်ကျော် ဆန်ကလဲ ဖြူဖြူအိအိ။
ရူဘီစီးကရက်က (2)လိပ် ဒါက ကျနော်တို့စားထားကြတာပါ။
အဲတော့ ဈေးလဲသက်သာ ကောင်းလဲကောင်း သန့်လဲသန့်
မြန်မာဆန်ဆန် ပုဆစ်တုပ်ထိုင်ချင်ထိုင် တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ချင်ထိုင် အားရပါးရထိုင်ပြီးလက်နဲ့ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ကျနော်ပြောတဲ့ဆိုင်လေးကို သွားအားပေးလိုက်ပါလို့ ကြော်ငြာလိုက်ပါတယ်။
ဒီထမင်းဆိုင်သေးသေးလေးကို ကြော်ငြာပေးရတာကတော့ ရိုးရိုးသားသားနဲ့တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်နေကြတဲ့
လုပ်ငန်းလေးတွေအများစုမှာ လူသိမများတော့ အရောင်းနည်း အရောင်းနည်းတော့လုံးပါးပါးပြီးလုပ်ငန်းရပ်သွားပါတယ်။
တကယ်လို့များ သူကောင်းတာ ဖော်ပေးလို့ လူသိများသွားရင် အရောင်းရတွင်ကျယ်လို့ လုပ်ငန်းဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို တနိုင်တပိုင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေက ကြီးထွားလာရင် တိုင်းပြည်မှာလည်း အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို အလိုလိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
မန်းလေးကိုလာဖြစ်ရင် အဲဒီဆိုင်မှာ လေးပေါက်လိုက်ကျွေးမလား
အခင်းအကျင်းလေးရော အစားအသောက်တွေကရော အလှူမှာပဲ စားရသလို အိမ်မှာပဲ စားရသလိုလိုနဲ့
တကယ့် မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ စားချင်စရာလေးပါပဲ ..
အခုအရေးကြီးတာက မနက်က ဘာမှ မစားခဲ့ရပဲ လေးပေါက်ပိုစ့်ကို ဝင်ဖတ်မိတာပဲ
အခုတော့ ဗိုက်တွေဆာလာလို့ အိတ်ထဲက ခြင်္သေ့လေးတွေ ခုန်ထွက်ကုန်ပြီ ..
ပြတ်တုန်းလပ်တုန်း 23 ပါဆိုမှ ……….
ဟုတ်ပဗျာ.. မန်းလေးက အစားအသောက်တွေကို သတိရလိုက်တာ….
မန်းလေးက ဈေးသည်တွေက စေတနာပါတော့ အစားအသောက်က အရမ်းအရသာရှိတယ်နော်…
သတိရလိုက်တာ.. ကိုပေါက်လမ်းကြုံရင် ပါဆယ်လေး ဆွဲခဲ့ပေးပါ… ဟဟဟ
No trouser , no skirts and shorts allowed . (just joke)
အင်း … သွားစားကြည့်မယ် လေးပေါက် …
(မသိဘူးနိုင်ဘူး….သူ ကအလကားစားရတယ်ဆိုပြီး…တချို့ တွေ ရှိတယ်လေ)စတာပါနော်
ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့အခါ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဆိုလို့.. တော်တော်များသလားထင်မိတာ.. ဈေးတန်တယ်ပေါ့..။
ပုဇွန်ဟင်းမှ.. တပွဲ ၂ဒေါ်လာဆိုတော့.. ပါဆယ်နဲ့မှာလို့ရသလားမေးပေးပါဦး..။
ပြောရရင်..ဂျပန်တွေလည်း ..ဗမာတွေလိုပဲ..ကွပ်ပစ်လို..ဖျာထူခင်းပြီး ထိုင်စားကြတယ်..။
ထိုင်သူတွေ..ကြာရင်..ခြေထောက်တွေနာမှာစိုးတာမို့ … သူတို့ဆိုင်တွေက.. မြေအောက်တွင်းတူးပြီး..ခြေချထိုင်ဖို့ပြုပြင်ထားလေရဲ့..။
စာပွဲထိုးတွေက.. စကပ်တိုနဲ့မဟုတ်ပါဘူး.။ ကီမိုနိုနဲ့ပေါ့..။
မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိစ္စ – ဦးမြင့်ကိုဖတ်ပြီး…
မပြောချင်တော့လို့ ..လေးပေါက်ဆီဘဲ …ပြောတော့မယ်
မြန်မာငွေ တန်ဖိုးတက်အောင်….တို့ ဘကြီးတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ..
680ဘဲ ဈေးရှိတယ်လို့ ..
ကန်တော့ခံတွေကပြန်ရောင်းပြီး၇င်..ပြန်တက်….ငွေကြေးလဲ လှယ်မှုက…ပြောတဲ့ အတိုင်းဘဲဖြစ်နေတယ်ဗျား)
စာထဲ မှာသင်ခဲ့ တြ့ ငွေကြေးနဲ့ 
ရန်ကုန်မှာ မနေ့ကပဲ မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာ ၂ ယောက်စားခဲ့တာ … ၀က်သားတစ်ပွဲနဲ့ ငါးသလောက်ပေါင်းတစ်ပွဲ … အရန်ဟင်းဘာမှမပါတာတောင်မှ ၇၈၀၀ ကျတယ် …
သုံးယောက်စားတယ်လည်းဆိုသေး ဘယ်နှယ်ထမင်းပန်းကန်က နှစ်ချပ်ထဲဖြစ်နေတာလဲ။ မလိမ်နဲ့နော်ဦးပေါက်၊ ဒါနဲ့ ဘဲသားဟင်းရော မပါဘူးလား။ သူများအသား တမ်းတရတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘဲသားက တကယ်ကောင်းတာ…
ခုတော့ တင်ပြီးပေါ့…. မသွားခင်ထဲက စောင့်ဖတ်ချင်နေတာ………. လေးပေါက်ရဲ့ မိတ်ဆွေက မန်းလေးလာရင် အဲဆိုင်လိုက်ပို့မယ်တဲ့…….. မလာခင်ထဲက ကြိုတင်ဘိုကင်လုပ်ထားတယ်…. :
ဆိုင်တွေမှာ စားရရင် ဟင်းတွေ အရမ်း ကောင်း ၊ မကောင်း ထက် (အရသာ အသင့်အတင့်ပဲ ရှိဦး ) သန့်၊မသန့်ကို ပိုကြည့်ဖြစ်တယ်
ရန်ကုန်က တချို့ ဆိုင် မကြီး၊တကြီးတွေ ဆိုင်မှာ ထိုင်စောင့်နေရင်းနဲ့ နောက်ဖေးဘက် ၀င်သွားမိရင် အသားတွေမှာ ယင်ကောင်က တစ်လောင်းလောင်း အကိုင်အတွယ်က ညစ်ပတ်နဲ့ စားချင်စိတ်ကကုန်ရော
ဦးပေါက် ဆိုင်က ကြည့်ရတာ အကိုင်အတွယ် က သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အိမ်မှာ စားရသလို အပြင်အဆင်နဲ့ စားချင်စရာလေး
ကိုပေါက်ရေ. ဆိုင်လေးကသေးပေမယ့် သန့် တယ်နော်။ဆိုင်တော်တော်များက ညစ်ပတ်ကြတယ်လေ။အိမ်ဆိုင်လေးဆိုတော့ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိမယ့်ပုံပါ။
ဆိုင်လေးက နဲနဲ သေးတော့ အစားအသောက် တန်သည့်တိုင်အောင် စီးပွား ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး.
အင်း..ပြောလို့ တော့ ရပါဘူး..သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ ခိုင် မှာပါ
ဆိုင်ပုံဆန်ကတော့ ရန်ကုန်မှာဆို `မွန်မလေး´ လိုပုံစံပါပဲ….စားကောင်းမှာပါ.
နံရံကို ဆေးလေးဘာလေးသုတ်၊အရှေ့ က မျက်နှာစာကိုလဲ ကြည့်ကောင်းအောင် ပြင်၊ဟင်းဇလုံတွေကိုလဲ မှန်ဘီရိုလေးထဲ ထည့်ထားမယ်ဆို….ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်ပြီး မိတ် ပိုရလာမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ဗျ.
မန်းလေးမှာ အဲထက်ကောင်းပြီး အဲဒီထက်တန်တဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် ဥပမာ ဇလုံကြီးတို. ပေါ့ ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများ စားကြတယ် ခုနောက်ပိုင်းမရောက်ဖြစ်လို.ဈေးတော့သိပ်မသိတော့ဘူး လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလလောက်ကစားတာတော့ တစ်ခါပြင်ကို ၉၀၀ ပဲကျတယ် အဲဒီတစ်ခါပြင်ကလည်း တော်ရုံတန်ရုံစားနိုင်တဲ့သူတော့ လိုက်ပွဲတစ်ပွဲလောက်နဲ့ကို ၀ တယ် လိုက်ပွဲကလည်းတစ်ရာပဲရယ်
လေးပေါက်ဆိုင်က တန်လှချည်လား … ဓနုဖြူ ဒေါ်စောရီမှာ နှစ်ယောက်သွားစားတာ … တစ်ယောက်က ပုစွန်ထုပ်ကြီးနဲ့.. တစ်ယောက်က ၀က်ကလီဆာနဲ့ … ခရမ်းသီး မီးဖုတ်သုတ်လည်း မှာတယ် ..ကျန်တာ အရံဟင်းပဲ … တစ်သောင်းကျော်ရှင်းလိုက်ရပါတယ် …
ပေးရပြီး တန်အောင်စားချင်ရင် ဘူဖေးသွားစားလို့ကောင်းတယ် … ၀ါးတမ်းလမ်းမက Doreen မှာ တစ်ယောက်ကို ကိုးထောင်ပဲရှိတယ် .. ဘူဖေးဖွင့်ချိန် ညနေခြောက်နာရီကတည်းက ပိတ်ချိန်ဆယ်နာရီထိ တအိအိနဲ့ စားနိုင်သလောက်စားမှ တန်တာ
ဟုတ်ပါတယ် ဇလုံကြီးကို ကျနော်သွားစားဘူးပါတယ်။
လောလောဆယ်အောင်မြင်နေတဲ့ဆိုင်က ဇလုံကြီးပေါ့ ဆိုင်ခွဲတွေတောင်ဖွင့်ထားပါတယ်။
အခုဆိုင်လေးက စတင်အားယူဆဲ ဆိုင်လေးမို့ ကြော်ငြာတဲ့အနေနဲ့ရေးပေးဖြစ်ပါတယ်.။
ကျနော်နဲ့အတူသွားစားတဲ့ မိတ်ဆွေကလဲ ရေးဘို့တိုက်တွန်းတာလဲပါတယ်။
ကြိုးစားအားယူလို့ လုပ်ငန်းထူထောင်စ ဆိုင်လေးမို့ မန်းလေးက မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ အလယ်ရောက်လာမယ့် မိတ်ဆွေများ သွားအားပေးချင်စိတ်ပေါက်လာအောင်ပါ…………………….
လေးပေါက် ၀ယ်ကျွေးတော. ရွှေဘိုကားကြီးကွင်းလာခဲ. အ၀စားမှ 1500 ပဲရှိတာ မှာတဲ.ဟင်းကို
ကျနော်တောင် ပြန်ရင် အမြဲကြိတ်တာ ဒီမှာက ဈေးကြီးတော. နေ.တိုင်း ကြုံသလို ဖြစ်သလို ကများနေတာ
ရွှေဘိုသား မန်းလေးရောက်ရင် လာခဲ့။
ကိုပေါက်က သူများကို “ကျွေး”တာဝါသနာပါတယ်။
ဟို ပို့ စ်ထဲ မှာ ကြတော့
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူ နှစ်ယောက် ဆို
ယင်ကောင် တွေ များနေရင် မောင်းနည်းရှိတယ်။
ဖယောင်းတိုင် ထွန်းလိုက်ရင် ပြေးသလို
ယင်ကောင်က အမှောင်လည်း ကြောက်တယ်။
အစားအစာတွေ အနားကို အမှောင်ချလိုက်ရင် လင်းလဲ့ နေရာကို ပြေးပါတော့တယ်။ သူတို့ ကောင်းကောင်း တည့်တည့် မတ်မတ် ပြေးနိုင်အောင် ယပ်တောင်လေး ခပ်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်။
ကြောညာမှာ ၀င်စားကြတဲ့ ပရိတ်သတ် တွေ အားလုံး နောက်နှစ် ကိုပေါက် နဲ့ မဒမ်ပေါက် ရဲ့ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် အဲဒီ ဆိုင်မှာ အားလုံးကို အ၀ ကျွှေးမယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ်။ အခုကတည်းက လက်ဖွဲ့ ကြိုပြင်ထားကြပါ။ အခု ထမင်းသွားစားတာလည်း ဘိုကင် သွားယူတာလို့ ကြားတယ်။ တီးတိုး စကားဆိုတော့ ကိုပေါက် ကိုသာ သေချာ မေးကြည့်မှ ဖြစ်မယ်။ ဟဲဟဲ.. လာမယ်နော်..